Shir looga hadlayey tayeynta Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo lagu qabtay Muqdisho | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Shir looga hadlayey tayeynta Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo lagu qabtay Muqdisho
Shir looga hadlayey tayeynta Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo lagu qabtay Muqdisho
Muqdisho (SNTV), Wasiirka Amniga gudaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta shir guddoomiyay kulan ay ka qeyb galeen wakiillo ka kala socday caalamka, kaasoo looga hadlayay dib u habeynta ciidanka Booliiska.
Kulankan oo looga hadlayay qorshaha dib u habeynta ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayna ka qeybgaleen wakiilka Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya, danjirayaasha wadamada safaaradaha ku leh dalka, wakiil ka socday UNDP, wasiirrada amniga maamulgoboleedyada hoosyimaada dowladda F. S. saraakiil ka socotay ciidamada AMISOM ayaa waxaa shirgudoomiyay wasiirka amniga gudaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow.
Wakiilka Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya, Danjirayaasha wadamada Britain, iyo Italy oo halkaasi ka hadlay ayaa wasaaradda amniga gudaha ee X. F. Soomaaliya ku bogaadiyay qorshaheeda ku wajahan dib u habeynta ciidanka booliiska , iyadoo danjiraha Britain uu halkaasi ka sheegay in dowladiisu qorshahan ku bixineyso 14 Milyan Doolar.
Wasiirrada ka soocday maamulgoboleedyada hoos yimaada dowladda Federaalka Soomaaliya oo halkaasi ka hadlay ayaa muujiyay sida ay ula dhacsanyihiin qoryayaasha wasaaraddu ay ku horumarineyso ciidamada ammaanka.
Taliyaha ciidanka Booliiska Soomaaliyeed S/guuto Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko, ayaa kulankaasi ka sheegay in lagu guuleystay tirakoobka ciidamada booliiska, isagoo dalbaday in ciidamada laga taageero baahiyaha heysta si ay ugu guuleeystaan hanashada ammaanka guud ee dalka.
Wasiirka amniga gudaha Maxamed Abuukar Islow oo kulankaasi soo xiray ayaa tilmaamay in kulankani uu qeyb ka yahay qorshayaasha wasaaradda eek u wajahan dib u tayeeynta ciidamada si u gutaan waajibaadka loo igmaday.
Previous articleDowladda Shiinaha oo $1.5 Malyan ugu deeqday Dowladda Soomaaliya
Next articleRa’iisul Wasaaraha XFS oo Xalay kormeer Amni ku sameeyay qaar kamid ah degmooyinka G/Benaadir